Nhau - Zvinomwe Zvinobatsira zveOrganic Fertilizer
Basa rakakosha kwazvo reOrganic Fertilizer kugadzirisa ivhu rezvinhu zvakasikwa, kugadzirisa ivhu nemakemikari eivhu, kugadzirisa kugona kwekuchengetedza mvura kwevhu uye kuchengetedza fetiraiza, nekubatsira zvirimwa kuwedzera goho uye kuwedzera mari.
Kubatsira 1：Fetiraiza imratidza kubereka kwevhu
Nheyo: Zvinhu zvekutsvagisa zviri muvhu hazvigone kunyudzwa zvakanangana nezvirimwa, uye mametabolite emakemikari anogona kunyungudutsa zvinhu izvi zvekutevera zvozvishandura kuita zvinovaka muviri zvinokwanisa kunyudzwa nekukosheswa nezvirimwa.
Pamusoro pechinhu chiri kuwedzera chemanyowa, chinhu chemanyowa chinoita kuti ivhu rive chimiro chakagadzirwa zvakanaka uye rinopa mukana wekubereka wakanaka.
Ivhu rave richishandiswa fetereza yakasununguka rinozowedzera kusununguka uye kubereka.
Chakanakira 2: Organic fetiraiza inokurudzira hutachiona zviitiko
Nheyo: Organic fetiraiza inogona kuita kuti microorganism iri muvhu ipararire muhuwandu, kunyanya inobatsira microorganism, inogona kuora zvinhu zvakasikwa muvhu, kusunungura ivhu, kuwedzera ivhu zvinovaka muviri nemvura, uye kubvisa ivhu rinosunga chipingamupinyi.
Organic fetiraiza zvakare inogona kutadzisa kubereka kwehutachiona hunokuvadza uye kugadzirisa kusagadzikana kwezvirimwa.
Chakanakira 3: Organic fetiraiza inopa yakakwana kudya uye kudzikisira kweheavy metal ions muvhu
Nheyo: Organic fetiraiza ine nhamba yakakura yezvikafu zvinovaka muviri, inoteedzera zvinhu, mashuga, nezvimwewo, uye inogona kuburitsa carbon dioxide yephotosynthesis.
Organic fetiraiza zvakare ine nitrogen, phosphorus uye potasium, iyo inogona kupa zvakasiyana siyana zvinovaka muviri kuzvirimwa.
Zvakare, organic fetiraiza inogona kutora iyo inorema simbi ions yevhu uye nekunyatsoderedza kukuvara.
Chakanakira 4: Organic fetiraiza inowedzera kusagadzikana kwezvirimwa
Nheyo: Organic fetiraiza inogona kusimudzira kushomeka kwezvirimwa uye kuderedza kuitika kwezvirwere.
Panguva imwecheteyo, ivhu rakasununguka, nharaunda yekupona yemidzi inovandudzwa, kukura kwemidzi kunosimudzirwa uye kushivirira kwekudyara kwezvirimwa kunogona kuvandudzwa.
Chakanakira 5: Organic fetiraiza inovandudza kuchengetedzwa kwechikafu
Nheyo: Izvo zvinovaka muviri zviri mu organic fetiraiza hazvina kukuvadza, zvisina chepfu uye zvisina kusvibisa zvinhu, izvo zvakare zvinopa chengetedzo kune yakachengeteka uye yakasvibira chikafu, uye inoderedza kukuvara kwesimbi inorema kumuviri wemunhu.
Kubatsira 6.: Organic fetiraiza inowedzera goho rezvirimwa
Nheyo: Iyo metabolites inogadzirwa neinobatsira tusingaoneki mu organic fetiraiza inogona kusimudzira iyo midzi kukura kwezvirimwa, uye zvakare kusimudzira maruva nemichero yekumisikidza chiyero, kuwedzera goho rezvirimwa uye kuzadzisa mhedzisiro yekuwedzera goho uye kuwedzera mari.
Chakanakira 7: Organic fetiraiza inoderedza kurasikirwa kwehutano
Nheyo 1: Organic fetiraiza inogona kuwedzera kugona kwevhu rekuchengetedza mvura uye kuchengetedza fetiraiza, kuvandudza chimiro chevhu, nekudaro kudzora kurasikirwa kwehutano, uye zvinobatsira zvipukanana zvinogona kubvisa phosphorus uye potasium, nekuvandudza mashandisiro anoita fetiraiza.
Nheyo 2: Mune ramangwana, pamwe nekuvandudzwa kwezvakatipoteredza zvekurima, fetereza fetiraiza ichashandiswa zvakanyanya, zvinobudirira kudzikisa kurimwa kwekugadzira mitengo uye kudzikisira kusvibiswa kwezvakatipoteredza.
Organic Compound Fetiraiza, Organic Fetiraiza Mugadziri, Humic Acid Organic Fertilizer, Bulk Organic Fertilizer Vanopa, Organic Fertilizer Kugadzira, Organic Fetiraiza Yekudyara,